InstaZoom - Khulisa isithombe sephrofayela ye-Instagram nge-HD egcwele
Isaziso: Inkomba engachaziwe: i-supperman in / ekhaya /instazoom.mobi/public_html/wp-content/themes/instazoom v2/header.php on line 93
InstaZOOM - Khulisa isithombe sephrofayela ye-Instagram
Buka futhi ulande izithombe zephrofayela ye-Instagram ngekhwalithi ephezulu kakhulu ye-HD.
Landa i-Insta DP nokuningi
Sebenzisa amathuluzi ethu okulanda i-Instagram ukuze ugcine izikhathi ezinhle kakhulu kudivayisi yakho ingunaphakade
I-Instagram iyinkundla yezokuxhumana enabasebenzisi abasebenzayo abangaphezu kwezigidi ezingama-600. Instazoom iyisibukeli sokuqala se-Instagram emhlabeni esikuvumela ukuthi ubuke izithombe zephrofayili ezinosayizi ogcwele, uzilande, nokunye. Instazoom iyisevisi eku-inthanethi ebonisa zonke izithombe eziku-akhawunti ngayinye yomsebenzisi ngefomethi enkulu ngaphandle kokushiya iwindi lesiphequluli sakho.
Imikhawulo Ekubukeni Instadp
Instadp sekunesikhathi eside ikhona futhi ngeke ihambe nakusasa. Kodwa kuthiwani uma ufuna ukubona isithombe sephrofayela yomuntu sibonakala ngokugcwele? I-Instagram iyayikhawulela le nketho, noma kunjalo Instazoom hhayi! Ukusondeza kwe-Insta inikeza enye indlela yokubuka okukhawulelwe ku-Instagram, ikuvumela ukuthi usondeze iphrofayili ye-Instagram zoom yabasebenzisi bakho abathandayo ngaphandle kwemikhawulo noma imikhawulo. Instazoom ikunikeza ukufinyelela kuzo zonke izici ze Instadp- I-akhawunti yomuntu.
isicelo se Instazoom empilweni?
Ukuhlonza abantu ezithombeni: Izithombe zephrofayela ye-Instagram azinokulungiswa okuphansi, okungenza kube nzima ukukhomba abantu ezithombeni. nge Instazoom ungabona isithombe sephrofayela ye-Instagram isondeziwe futhi sinokulungiswa okuphezulu, okwenza kube lula ukuhlonza abangani nomndeni wabo.
Ungabona ukuthi isithombe sephrofayela singesoqobo yini ngokusiqhathanisa nesithombe esilungile somunye umuntu.
Kopisha isithombe sakho sephrofayela esisha bese usinamathisele ocingweni lwakho: ungalanda isithombe bese usigcina kugalari yakho ukuze usibuke ngokuhamba kwesikhathi, noma usisebenzise njengephepha lodonga ocingweni noma kukhompuyutha yakho.
Wake wathola izicelo eziyinqaba ku-Instagram ezivela kubantu ongabazi ngokuphelele? Ngaphambi kokuthi wenze isinqumo, cabanga ukuthi kwenziwa ngezinhloso ezinhle noma ezimbi.
Ukusebenziseka okungenamkhawulo - Instazoom ingasetshenziselwa izinto ezihlukahlukene.
Instazoom ithembela egameni lephrofayela yakho noma i-url yephrofayela esesidlangalaleni noma othile oku-Instagram ukuze uthole izithombe. Instazoom Khulisa izithombe ze-Instagram ukuze ukhiqize izithombe ezisezingeni eliphezulu.
Nge-Insta Zoom, ungasondeza ngokushesha kuphrofayela ye-Insta futhi ulayishe izithombe zephrofayela zabanye abasebenzisi be-Instagram. I-Insta Zoom ikusiza ukuthi ucubungule isithombe sakho sephrofayela ye-Insta ngekhwalithi ye-HD.
Ungasikhulisa kanjani noma usilande kanjani isithombe sephrofayela ye-Instagram nge Instazoom?
Isinyathelo 1: Vakashela ikhasi lethu eliyisiqalo kokuthi: www.instazoom.mobi
Isinyathelo 2: Faka i-url ye-Instagram noma igama lomsebenzisi ebhokisini lokusesha kuwebhusayithi bese ucindezela inkinobho "I-ZOOM".
Isinyathelo 3: Lapho imiphumela iphuma, ungacindezela inkinobho yokubuka i-zoo ukuze ubone isithombe sephrofayela ye-Instagram esondeziwe sikhulu ngekhwalithi engcono kakhulu.
Isinyathelo 4: Chofoza inkinobho ethi Landa ukuze ulande isithombe sakho sephrofayela ngekhwalithi ephezulu kakhulu.
kuyinto Instazoom kwezomthetho?
Instazoom kusemthethweni ngokuphelele njengoba amaphrofayili e-Instagram abiwa esidlangalaleni. Instazoom- Ngakho abasebenzisi basemthethweni ngokuphelele.
kuyinto Instazoom isofthiwe?
Azizona! Instazoom iyisizindalwazi esikuvumela ukuthi ubuke futhi ulande izithombe ezinhle kakhulu zephrofayili ye-Instagram.
Ngisilanda kanjani isithombe sephrofayela ye-Instagram kukhompyutha?
Instazoom isebenza kahle kunoma iyiphi idivayisi. Ungakwazi www.Instazoom.Mobi vakashela ukulanda isithombe esihle kakhulu sephrofayela ye-Instagram se-PC yakho.
Kuyini ukukhulisa isithombe sephrofayela ye-Instagram - i-insta zoom?
Isebenza kanjena Instazoom empeleni. Ngokuvamile i-Instagram ayikuvumeli ukuthi ubonise izithombe zephrofayili ezisezingeni eliphezulu. Instazoom yakhelwe ukukhulisa nokuvuselela izithombe zephrofayili ye-Instagram ezisezingeni eliphezulu ukuze zibukwe futhi zilandwe.
Ngingakwazi ukubuka ama-akhawunti ngokungaziwa njengomphumela?
Azizona! Sivumela abasebenzisi ukuthi basebenzise kuphela Instazoom nama-akhawunti omphakathi e-Instagram.
kuyinto Instazoom mahhala?
Instazoom imahhala ngokuphelele. Asikhokhisi noma yiziphi izimali ezengeziwe. Nawe ungakwenza Instazoom ukusebenzisa ngokuthula kwengqondo okuphelele.
iZoomYou eziningi emakethe azisasebenzi noma azinzile, ikhwalithi ephansi uma ulanda izithombe. InstaZoom Ngakho-ke enye indlela engcono kakhulu ye-iZoomYou yokubuka imininingwane futhi ulande izithombe zephrofayili ye-Instagram ngekhwalithi engcono kakhulu.
Iwebhusayithi ye-Izuum DB ayisasebenzi. Instazoom ngakho-ke ithuluzi elingcono kakhulu lokungena esikhundleni se-Izuum lokukhulisa isithombe sephrofayela ye-Instagram ngekhwalithi engcono kakhulu.
hat Instazoom isandiso?
Yebo ungayithola Instazoom-Isandiso esitolo sezengezo se- Chrome- futhi Firefox-Iziphequluli.
Isebenza kanjani Instazoom-Isandiso?
Ungabuka isifundo sevidiyo ngezansi sendlela yokusebenzisa i- Instazoom-Buka isandiso: